Tag: branding » Martech Zone
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Masangano anowanzo shandisa ma vector mafaera ane marezinesi uye anowanikwa kuburikidza nemasaiti emifananidzo. Dambudziko racho rinouya pavanenge vachida kugadzirisa zvimwe zvibatiso mukati mesangano kuti vaenzanise makwikwi uye marangi anoenderana neakamboburitswa iconography kana zviratidzo. Dzimwe nguva, izvi zvinogona kuve nekuda kwekudzoka zvakare… dzimwe nguva vagadziri vatsva kana zviwanikwa zvesangano zvinotora zvirimo uye dhizaini dhizaini nesangano. Izvi zvichangobva kuitika nesu apo patakatora nzvimbo tichishanda
Itsva Martech Zone Logo ye2019
Svondo, Ndira 6, 2019 China, May 7, 2020 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Imwe nzvimbo yandisina kuisa mari yekumaka yaive ino saiti. Nepo yangu agency iine logo huru yandinoda, uye isu tichishanda pamwe nevatengi vedu vese pakuratidza kwavo, ini ndanga ndisina bandwidth yekushandira pa Martech Zone muchiso… kusvikira nhasi. Chiratidzo chekare "M" chaive mufananidzo wakashandurwa zvishoma wandakatenga nekuchimbidza mushure mekunge ndachinja duraini. Izvo zvaive pachena, zvaisamiririra chero chinhu, uye
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Shamwari dzangu dzinofarira kundipa nguva yakaoma yekuve anofarira Apple. Ini ndinogona kutendeka zvese izvi kushamwari yakanaka, Bill Dawson, akanditengera mudziyo wangu wekutanga weApple - AppleTV… ndokuzoshanda neni kukambani uko kwataive isu vekutanga zvigadzirwa maneja kushandisa MacBook Pros. Ndanga ndiri fan kubvira ipapo uye ikozvino, kunze kweKumba Kwembavha neAirport, ini ndine yega yega kifaa.
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Anenge mwedzi wapfuura, ini ndakazotora chikamu mumusangano wekushambadzira wevatengi. Izvo zvaive zvakanakisa, kushanda pamwe neyekubvunza kunozivikanwa nekugadzira nzira dzemigwagwa dzemakambani epamusoro tekinoroji. Sezvo nzira dzemumigwagwa dzaigadzirwa, ndakafadzwa nematanho akasarudzika uye akapatsanurwa timu akauya nawo. Nekudaro, ini ndaivewo ndakatsunga kuita kuti timu itarise pamusika wakanangwa. Innovation inzira yakakosha mumaindasitiri mazhinji nhasi, asi
Chishanu, June 1, 2018 Tara Kelly
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Alexa, izwi reAmazon-rakagonesa wega mubatsiri, anogona kutyaira anopfuura $ 10 bhiriyoni mumari mumakore mashoma chete. Mukutanga kwaNdira, Google yakati yatengesa zvinopfuura mamirioni matanhatu zvigadzirwa zveGoogle Kumba kubva pakati paGumiguru. Mubatsiri bots senge Alexa uye Hei Google vari kuve chinhu chakakosha chehupenyu hwazvino, uye izvo zvinopa mukana unoshamisa wezvikwata zvekubatana nevatengi papuratifomu nyowani. Shungu dzekugamuchira iwo mukana, zvigadzirwa zviri kumhanyisa